Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Khamriga Faransiiska: Wax soo saarkii ugu xumaa tan iyo 1970kii
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Khamriga & Ruuxa
Faransiiska ayaa caan ku ah raaxada waxaana lagu daray shaxdan khamriga. Wadanku waxa uu soo saaraa ku dhawaad ​​16 boqolkiiba khamriga aduunka waxa uuna ka shaqeeyaa in ka badan 142,000 oo qof qaybta beerashada khamriga oo kali ah.
Baaritaanka Reuters ayaa lagu ogaaday in Khamriga Faransiiska Wax soo saarka warshadaha waxay u badan tahay inuu hoos u dhaco ku dhawaad ​​30 boqolkiiba sanadkan, marka la barbar dhigo sanadkii hore, taasoo ka dhigaysa 2021 sanadkii ugu xumaa tan iyo 1970 waxayna u badan tahay inuu noqdo sanadkii ugu xumaa ee la diiwaan geliyo.
Sababaha warkan xun waxaa ka mid ah dhaxan Abriil, Covid 19 fowdo, dagaalka ganacsiga ee madaxweyne Trump ee lagu beegsanayo khamriga Faransiiska, daadad xagaaga oo ay weheliso heerkul sare oo horseeday abuurista fangaska geed canabka ah oo baabi'iyay dalaggii intiisa badan.
Kuwa jecel khamriga waa inay helaan khamrigooda Faransiiska HADDA si ay ugu diyaar garoobaan xilliga fasaxa oo ay isku dayaan inay ka fogaadaan qiimaha korodhka ee diiwaanka lacagta.
Sancerre waxay ku taal cidhifka bari ee Loire Valley ee beerta canabka ah waxayna u dhowdahay Cote d'Or ee Burgundy marka loo eego degmooyinka kale ee khamriga ee Loire ee Anjou iyo Touraine. Aagga viticultural wuxuu daboolayaa 15-mayl oo ah buuro rogaal-celin ah oo ku yaal daanta galbeed ee Loire oo leh 7000 hektar oo geed canab ah oo loogu talagalay soo saarista khamriga rafcaanka.
Noocyada carrada waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood: nuurad, dhagax nuurad-dhagax, iyo silix (dhagax). Flint waxaa badanaa lagu tiriyaa qiiqa qiiqa ee gaarka ah ee caraf udgoon (gunflint) iyo sababta Sauvignon oo lagu magacaabo Blanc Fume.
Sancerre waxaa lagu xusay khamriga cad cad ee qallafsan, caraf udgoon oo laga sameeyay Sauvignon Blanc. Sancerre-ga caadiga ah waa caddaan, aashito leh oo leh qoraallo gooseberries, caws, maraboob iyo macdanta dhagaxa ah. Phylloxera waxa ay tirtirtay beero canab ah oo aad u ballaadhan badhtamihii qarnigii 19-aad iyada oo burburisay raadad badan oo noocyo khamri ah oo casaan ah sida Gamay iyo Pinot Noir. Beeraha canabka ah ayaa dib loogu beeray Sauvignon Blanc aagguna wuxuu helay heerka AOC 1936.
Domaine Girard Sancerre 2020 Xusuusin. 100 boqolkiiba Sauvignon Blanc. Domaine Fernand Girard waxaa haga Alain Girard, isagoo raacaya raadkii jiilalka khamriga ee tuulada Chaudoux, oo ku taal dhowr mayl waqooyi-galbeed ee Sancerre iyo waqooyiga Cavignol. Beerta canabka ah waxa ay dabooshaa 14 hektar, Girard waxa uu ka iibiyaa qaar ka mid ah gorgortanka gorgortanka waxana uu shakhsiyan dhalo ku shubaa qayb ka mid ah wadarta guud ee wax soo saarka magaca qoyska. Cuvee La Garenne wuxuu ka yimid beer canab ah oo 2.5 hektar ah oo ku taal jiirar bari u sii jeedday oo leh carro dhagax limestone ah. Ciidda nuuradaysan waxay kor u qaadaysaa dabeecadda jilicsan, macdanta iyo qoraallada cagaaran ee Sauvignon Blanc.
Hantidu waxay isticmaashaa tignoolajiyada casriga ah oo ay ku jiraan saxafada pneumatic-ka ah, birta-tuugyada birta ah, nidaamka xakamaynta heerkulka inta lagu jiro halsano iyo meel hawo qaboojiye ah oo loogu talagalay gabowga weelka iyo dhalooyinka wax lagu kaydiyo. Inkasta oo tignoolajiyadu ay tahay qarniga 21-aad, habab dhaqameed ayaa lagu isticmaalaa beerta canabka ah halkaas oo dhirta dhirta iyo daawaynta si yar loo isticmaalo, iyo khamiirka ganacsiga looma soo bandhigin si ay u keento halsano ama dhadhan. Natiijadu waa Sancerre oo soo bandhigaya caraf udgoon, oo ay weheliso asiidh cusub oo leh astringency hoose.
Alain Girard - Sawirka Nuux Oldham
Isha waxaa lagu abaalmariyaa dahab jaale ah oo cirro leh sankuna wuxuu ogaanayaa xawaashka, diirka liinta, cawska cagaaran ee cusub, tufaax cagaaran, xoogaa liin ah iyo dhagax dhagax ah. Waxay si fiican ugu lammaansan tahay kalluunka cad ee fidsan ee maraqa caper-ka ah laakiin gooni ayuu u taagan yahay xoog iyo sharaf.
Halkan ka akhri Qaybta Koowaad: Barashada ku saabsan khamriga Dooxada Loire Axadda NYC
Nofeembar 24, 2021 at 12: 49
Mid kale "waa khaladka Trump."
Tariifyada Maraykanku waxay jawaab u ahaayeen kabka xaq-darrada ah ee Midowga Yurub ee Airbus, sida ay xustay WTO. Tariifyada waxaa loogu talagalay in lagu keeno xoogaa sinnaan ah ganacsiga US-EU. Waxay noqon lahayd mid waxtar leh in la sheego sheekada oo dhan oo laga gudbo eedda Trump.